Xog: Farmaajo & Kheyre oo Dagaal gaar ah kula jira Labo Maamul Gobaleed | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Xog: Farmaajo & Kheyre oo Dagaal gaar ah kula jira Labo Maamul...
Xog: Farmaajo & Kheyre oo Dagaal gaar ah kula jira Labo Maamul Gobaleed
Qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa dhaliil kulul u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra’iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre.
Xildhibaan Axmed Cabdi Cali oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya iyo ra’iisul wasaaraha dalka ay ka dambeeyaan dhibaatada heysata deegaanada Hirshabeelle.
Xildhibaan Axmed Cabdi, ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dhuun qabatay maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug, islamarkaana ay horumar ka sameyn waayeen madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha dalka.
SIdoo kale xildhibaanka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay yareysay dhaqaalaha loogu talo mashaariicda dib u heshiisiinta iyo horumarinta deegaanka taasi badalkeeda Jubbaland iyo Puntland la siiyay dhaqaalo dheeraad ah.
“Dhibaatada Hirshabeelle heysata waa madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Kheyre, waxaad og tihiin in lacag dib u heshiisiin loogu talo galay in lagu hagraday Galmudug iyo Hirshabeelle halka maamulada kale loo kordhiyay”
“Galmudug iyo Hirshabeelle ayay diidan yihiin inay horumar gaaraan, Hirshabeelle waad og tihiin dad magac leh ayaa ka dhashay, waxaa la diidan yahay horumarkooda iyo xadaarada ay gaareen”ayuu yiri xildhibaanka.
Previous articleXog: Mooshin ka dhan ah Khayre oo Kenya lagu diyaariyay
Next articleXog: RW Khayre oo durba bilaabay kulamo uu uga hortagayo Mooshinka laga keenayo